Raadreeb | Archive | Wararka | 26
Home » Archives by category » Wararka (Page 26)
Puntland oo tijaabinaysa doorasho qof iyo cod Ah.
March 27, 2019 Comments Off on Puntland oo tijaabinaysa doorasho qof iyo cod Ah.
Wasiirka arrimaha gudaha,federaalka iyo dimuqaradiyeynta Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad wuxuu sheegay illaa saddex degmo inay ku qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah,qorshaha oo tijaabo u ah sidii ay Puntland ugu dhici lahayd shacabka inay soo doortaan madaxweynaha marka la gaaro sannadka 2023. “Waxaa qorshaha noogu jirta sannadkaan 2019ka inta uusan dhammaan bisha 10aad bisha […]
Madaxweynaha Soomaaliya oo furey Kalfadhigii 5-Aad Ee Baarlamaanka.
March 27, 2019 Comments Off on Madaxweynaha Soomaaliya oo furey Kalfadhigii 5-Aad Ee Baarlamaanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigga shanaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay furitaanka Kalfadhiga ayaa sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay uu saxiixay labo sharci oo kaliya, loogana baahan yahay Golaha Shacabka in ay dardargeliyaan ansixinta handi-sharciyeedyada oo wali horyaala Labada […]
Donald Trump oo lacagtii gidaar meel kale ka helay.
March 27, 2019 Comments Off on Donald Trump oo lacagtii gidaar meel kale ka helay.
Aqalka Pentagonka ee looga taliyo militariga dalka Maraykanka ayaa ansixiyay lacag dhan $1 bilyan oo doolar oo ka mid ahaa miisaaniyadda ciidanka in loo leexiyo dhanka dhismaha gidaarka uu ku taahayo madaxweyne Donald Trump. Lacagtan ayaa ah tii ugu horeysay oo la heley tan iyo intii madaxweynaha uu ku dhowaaqay xaaladda degdegta ah si uu […]
Xiisada u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland Ee Gobolka Sanaag Oo Hab Beeleed Lagu Xalinayo.
March 26, 2019 Comments Off on Xiisada u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland Ee Gobolka Sanaag Oo Hab Beeleed Lagu Xalinayo.
Odoyaasha iyo isimada gobolka Sanaag oo shir ku yeeshay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolkaasi ayaa hab-beeleed uga heshiiyay colaadda ka aloosan degmada Yubbe ee u dhexaysa Puntland iyo Somaliland. Shirkan oo aan warbaahinta lala wadaagin ayaa waxa isku horfadhiistay waxgarad iyo isimo ka soo kala jeeda beelaha galbeedka iyo bariga ee gobolka Sanaag waxaana lagu […]
Madaxweyne Kuxigeenka Mareykanka oo ku biiray dagaalka afka ee ka dhanka ah Ilhaan Cumar.
March 26, 2019 Comments Off on Madaxweyne Kuxigeenka Mareykanka oo ku biiray dagaalka afka ee ka dhanka ah Ilhaan Cumar.
Madaxweyne Kuxigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa ku biiray dagaalka afka ah ee ka dhanka Haweeneyda asalkeeda Soomaaliga yahay ee katirsan Congress-ka Mareykanka Ilhaan Cumar. Mike Pence ayaa talo ahaan u soo jeediyay in Xildhibaan Ilhaan Cumar laga saaro Guddiga xiriirka dibadda ee Golaha aqalka hoose ee Mareykanka, isagoo arintaasna sabab uga dhigay inay dadka […]
Ra’iisulwasaaraha giriiga” Diyaaraddeydu waxay si dirqi ah uga baxsatay diyaaradaha dagaalka ee Turkiga”
March 26, 2019 Comments Off on Ra’iisulwasaaraha giriiga” Diyaaraddeydu waxay si dirqi ah uga baxsatay diyaaradaha dagaalka ee Turkiga”
Ra’iisulwasaaraha Giriigga ayaa sheegay in isaga oo diyaaraddiisa saaran oo u dabaal dagaya maalinta xoriyadda uu “carqaladayn kala kulmay” diyaaradaha dagaalka ee Turkiga. Alexis Tsipras ayaa sheegay in diyaaraddiisa lagu qasbay “in ay xidaaraysato” ka dib markii diyaaradaha dagaalka ee Turkigu ay Isniintii galeen hawada Giriigga. Ra’iisulwasaaraha ayaa Turkiga ku eedeeyay “ficil axmuqnimo ah oo […]
Nin dhalinyaro ah oo loo doortay duqa magaalada Gaalkacyo.
March 25, 2019 Comments Off on Nin dhalinyaro ah oo loo doortay duqa magaalada Gaalkacyo.
Saahid Maxamuud Cali oo ah nin dhalinyaro ah ayaa maanta loo doortay inuu noqday duqa iyo guddoomiyaha magaalada Gaalkacyo qeybta Puntland kadib markii golaha deegaanka ay u codeeyeen doorashada guddoomiyaha iyo duqa Gaalkacyo. 23 cod ayuu helay Saahid Maxamuud halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Cabdiqani Diiriye Dhagaweyne uu ka helaya 7 cod iyadoo mid […]
Madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho soo gaaray.
March 25, 2019 Comments Off on Madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho soo gaaray.
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Jubbaland Axmed Islaam ( Axmed Madoobe) ayaa goor dhaw soo gaaray magaalada Muqdisho Waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha Wasiirradda xukuumadda Soomaliya oo uu horkacayo Wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanno ka kala tirsan labada Aqal ee dowladda. Socdaalka Axmed Madoobe ayaa la xiriira dhameystirka heshiiska Jubbaland iyo dowladda […]
Deni oo Todobaadkan Bosaaso Safar ku tegaya.
March 25, 2019 Comments Off on Deni oo Todobaadkan Bosaaso Safar ku tegaya.
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa socdaalkii ugu horreeyay Garoowe uga baxayaa tan iyo markii la doortay 8-dii Jannaayo ee sannadkan 2019. Ilo’ ku dhow xafiiska madaxweynaha ayaa warbaahinta Pu xaqiijiyay in socdaalkii ugu horreeyay ee madaxweynuhu Garoowe uga baxo tan iyo markii la doortay uu dhammaadka todobaadkan ku tegi doono magaalada Boosaaso ee xarunta […]
Page 26 of 68« First‹ Previous2425262728Next ›Last »